SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Itai zvinhu zvose kuti Mwari akudzwe.”​—1 VAK. 10:31.
4 Shoko raMwari rine mazano anobatsira vaKristu kuti vaite zvisarudzo zvakanaka panyaya yekupfeka. Mazano aya anoshanda pasinei nekwavanogara, tsika dzavo, kana kuti mamiriro ekunze. Hatidi hedu kunyorerwa pasi zvitayera zvose zvembatya zvakakodzera uye zvisina. Panzvimbo pezvo, tinotungamirirwa nemazano ari muMagwaro, ayo anobvumira munhu kusarudza zvaanofarira. Ngationei mamwe mazano emuBhaibheri anogona kutibatsira kuziva kuti “zvinodiwa naMwari zvakanaka, zvinogamuchirika uye zvakakwana” ndezvipi pakusarudza zvekupfeka.​—VaR. 12: 1, 2.
10 Patinenge tiri pamwe chete nehama nehanzvadzi dzedu, mapfekero edu anofanira kubatsira pakuita kuti vari muungano vave netsika dzakachena. Ndizvo zvatinofanira kuita pasinei nekuti tiri pamisangano kana kuti pane imwewo nzvimbo. Tine rusununguko rwekusarudza zvekupfeka. Kunyange zvakadaro, tose tinofanira kupfeka mbatya dzisingaiti kuti vamwe vaomerwe nekuramba vakachena pane zvavanofunga, zvavanotaura uye zvavanoita. (1 Pet. 1:15, 16) Rudo rwechokwadi “haruzvibati zvisina kufanira, haruzvitsvakiri zvarwo.”​—1 VaK. 13:4, 5.
11 Vashumiri vaMwari pavanosarudza zvekupfeka, vanofunga nezvekuti “chinhu chimwe nechimwe chine nguva yakatarwa.” (Mup. 3:1, 17) Zvinonzwisisika kuti zvatinopfeka zvinoenderana nemamiriro ekunze uye kuchinja kwemwaka. Zvinoenderanawo nekusiyana-siyana kwemamiriro ezvinhu. Asi zvinodiwa naJehovha hazvichinji panochinja mamiriro ekunze.​—Mar. 3:6.
17 Zvakakodzera here kuti hama dzichengete ndebvu? Mutemo waMosesi waida kuti varume vachengete ndebvu. Zvisinei, vaKristu havasi pasi peMutemo waMosesi uyewo havasungirwi kuuchengeta. (Revh. 19:27; 21:5; VaG. 3:24, 25) Mune dzimwe tsika, ndebvu dzakanyatsochekererwa dzinogona kugamuchirika kana kuremekedzeka, uye dzingasaita kuti vanhu varambe kuteerera mashoko eUmambo. Dzimwe hama dzakagadzwa dzinotova nadzo. Kunyange zvakadaro, dzimwe hama dzingasarudza kusachengeta ndebvu. (1 VaK. 8:9, 13; 10:32) Mune dzimwe tsika kana kuti nzvimbo vanhu havawanzochengeti ndebvu uye hazvigamuchiriki kuti Zvapupu zvaJehovha zvive nadzo. Kana hama iine ndebvu, izvozvo zvinogona kuita kuti Mwari asakudzwa uye inenge iine chainopomerwa.​—VaR. 15:1-3; 1 Tim. 3:2, 7.
18 Tinoonga chaizvo kuti Jehovha haatiremedzi nekutidonongodzera mitemo inotaura nezvemapfekero nekushambidzika kwedu. Asi anotibvumira kushandisa rusununguko rwedu rwekusarudza kuti mumwe nemumwe wedu asarudze zvine musoro, achitungamirirwa nemazano emuMagwaro. Saka kunyange mapfekero nekushambidzika kwedu zvinogona kuratidza kuti tinoda ‘kuva nemwero pakufamba naMwari wedu.’​—Mika 6:8.
20 Zvipfeko zvatinosarudza kupfeka zvinofanira kuita kuti vanhu vasambofunga chimwe chinhu kunze kwekuti tiri vanamati vaJehovha. Hama nehanzvadzi dzedu uye vamwewo vanhu vanofanira kuona kuti takakodzera kumiririra Mwari wedu akarurama. Zvaanoda zvakanaka zvikuru, uye tinoedza nepatinogona napo kuzvitevedzera tichifara. Tinofanira kurumbidza hama nehanzvadzi dzinoratidzika zvakanaka uye dzinozvibata zvakanaka, zvichiita kuti vanhu vane mwoyo yakanaka vawane mashoko eBhaibheri anopa upenyu uye vakudze Jehovha. Kusarudza neuchenjeri zvatinopfeka kucharamba kuchipa rukudzo kuna Iye anopfeka “kukudzwa nokubwinya.”​—Pis. 104:1, 2.